पिरामिड शैलीको नेटवकिंङमा ठगि – MeroOnline Khabar
काठमान्डाै/ साइन ग्रुपका नाममा काठमाडौं आएर पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ विस्तार गर्न आएका २० भारतीय पक्राउसँगै थप पीडित प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छन् ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंले बुधबार थप तीन पीडितको निवेदन दर्ता गरेको छ । उनीहरुको नेटवर्कको सदस्य बन्ने भन्दै २० लाख ८ हजार ५ सय रुपैयां फसाएका बताएका छन् । यस अघि नै परिसरमा १ करोड ६० लाख फसाएका तीन जनाले नेटवर्क सञ्चलकविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डीएसपी होबिन्द्र बोगटीले थप १७ पीडित सम्पर्कमा आएको र उनीहरु निवेदन दर्ता गराउने क्रममा रहेको बताए । प्रहरीले वैशाख २८ मा साइन ग्रुपका नाममा काठमाडौं आएर पिरामिड शैलीको नेटवकिंङ विस्तार गर्न आएका १२ भारतीयलाई पक्राउ गरेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
काठमाडौंमा । पाकेटमारीए पछि !
काठमाडौं । ‘बहिनी तपाईको पाकेटमारी भएको रहेछ । मेरो पनि केहिदिन अगाडि साँखुको बसमा चढेर आउँदा पैसा चोरी भएको थियो । कतिपय बसमा त खलासिकै संलग्नता हुने गरेको समेत पाइएको छ ।प्रहरी प्रभाग थली मै एक युवक भन्दै थिए ‘दूधको कारोबार गर्छु । दुई चार पटक बसमा चोरी भयो अहिले मैले साँखुको बस नै चढ्न छाडिदिएँ । भिड बसमा यात्रा गरिरहेका उमेरले ७० नाघिसकेका एक बृद्ध आफ्नो स्टकोटको पकेट देखाउँदै गुनासो गरिरहेका थिए । ‘हेर्नुस् त यहाँ के हबिगत बनाएको । काटिएको स्टकोटको धुजाधुजा पकेट देखाउँदै उनले भने ‘काम गरी खाने हात के भएको होला ,सधैँ चोरी गरेरे खान पल्केको छी !उनी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–७ का हरिबहादुर थापा थिए । चावहिलबाट बसमा चढेका थापा थली पुग्दा गोजिमा एक रूपैयाँ बाँकी नरहेको बताउँथे । मुख निन्याउरो बनाउँदै घटनाको बेलिबिस्तार लागाए चावहिलबाट छेउमा एक जना कालो सलले मुख छोपेकी २०–२१ वर्षकीजस्ती देखिने महिला छेउमा बसेकी थिइन् । आफूले बोकेको झोलामा अडेसलागेर निउरिएकी थिइन् । त्यहीबेला कसरी काटेको हो आफू पत्तो नपाएको उनले बताइन् । ‘बीचमा अफ्ठ्यारो भए झैँ भयो मैले स्टकोट सम्हालेँ तर पाकेटमारी भएको पत्तो पाईनँ’ उनले भने ।बसबाट आर्लन खोज्दै गर्दा सहचालकालाई उनले भने, ‘स्टकोटको खल्तिकाटी सबै लुटेछ मसँग भाडा तिर्ने पैसा छैन है भाइ ।’ सहचालकले तत्कालै जवाफ दियो मैले चोरेको हो र भाडा नतिरी जानलाई ?एक महिला रत्नपार्कमा साँखु जाने बस पर्खिरहेकी थिइन् । बाबा गोकर्णेश्वर बस आयो तर चढ्न सक्ने अबस्था थिएन । कसरी बसमा चढ्नु झैँ गरी हतारहतार बसमा कोचिइन् । सिटमा बसेर उठ्दा ब्यागमा भएका सबै सामन एकाएक भुर्इँतिर छरिन थाले । आत्तिदै उनले भनिन्,‘मेरो ब्यागमा भएको पैसा,पर्स मोवाइल सबै हराएछ । ’ उनको ब्याग तलबाट काटेर चोरी भएको रहेछ । उनी भन्दै थिइन् ‘आमा अस्पतालमा इमरजेन्सीमा हुनुहुन्छ । अब कसरी उपचार गर्नु ?’रत्नपार्कबाट साँखुको बसमा चढेकी चढेकी एक युवती बसमा बसुन्जेल आफ्नो ब्याग छातिमै टसाँएर चेपेकी थिएन् । उनी कागेश्वरमनोहरा नगरपालिका–७ मा झरिन् । ओर्लने बेलामा बसमा ज्यादै भिड भएकाले सकसका साथ आर्लिएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘राति भएकाले घर पुग्ने चटारो भयो कुनै याद नै भएन । घरमा पुखेर ब्याग हेर्दा कुनै सामान थिएन । पैसा, एटिएम्, सूचना विभागको कार्ड सहित सम्पूर्ण सामान चोरी भएको उनले बताइन् ।’यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् यस्ता घटना रत्नपार्कबाट साँखु पुग्ने बसका लागि नौलो विषय भने होइन । दैनिक १० जना यात्रुले आफ्नो सामान चोरी भएको गुनासो. गर्ने गरेको पाइएको छ । सो बसमा चढेपछि हरेक यात्रुको मन झस्कने गर्छ आफूले बोकेको सामान चोरी हुने हो कि ?४० सिट क्षमताको बसमा एकसय ५० देखि दुई सयसम्म अटाएर जानु पर्ने बाध्यता हुन्छ । सहचालकले भेडा बाख्रालाई झैँ व्यवहार गर्छन् । पछाडि सर्नेे ठाउँ नै हुँदैन तर पनि उसको त्यो थेगो नै बनिसकेको छ । सिट क्षमताको कुरा त परैको कुरा तीन लाइन उभिनु पर्ने बाध्यता हुन्छ ।धेरै बस आउँदैन गन्तव्यमा पुग्ने पर्ने हुन्छ । उभिएर यात्रा गर्दा पाकेटमारको डर हुनु त छदैछ । नयाँ यात्रुलाई आफू कहाँ पुगियो भन्नेसम्म पनि जानकारी हुँदैन । चालक र सहचालकलाई कहाँ आइपुगियो भनी सोध्दा झर्किएर जवाफ दिन्छन् ।भरिभराउ यात्रु राख्न पाए बस लैजान्छन् त अलि कम अर्थात सिटफुल मात्र भएको खण्डमा बिचमै बस्ने गरेको यात्रुको गुनासो छ ।
← गएराति नवलपुरमा दर्जनौं घरहरुमा हावाहुरी सहित असिनाले दर्जनौं घरहरुमा क्षति
पाँचथर हत्याकाण्ड : छिमेकीले दिए सबै झस्किने यस्तो बयान ! →